Famerenana sy fanamarihana momba ny zavakanto nataon'i Neil Gaiman - Ikkaro
firosoana >> boky >> Fanamarihana sy fanamarihana >> Zava-kanto nataon'i Neil Gaiman
Tena tsara tarehy ny fanontana fanontana Destino. An'ny fanangonana Ancora & Delfín izany. Boky haingana be ny famakiana azy, azonao vakiana ao anatin'ny 1 ora, nefa tena mahaliana. Boky hafa, haingana be ny famakiana, ary tena tsara sy tsara omena ho fanomezana izay noresahintsika Ithaca and with Mandrehitra afo.
Raha liana ianao dia afaka mividy azy eto.
Manokana, misy lahatsoratra 4:
Ny antony mahatonga ny hoavintsika dia miankina amin'ny tranomboky, famakiana ary manonofinofy.
Ahoana ny fomba fanangonana seza.
Manaova zavakanto tsara.
Navoaka voalohany tamin'ny 2015 avy amin'ny New Statesman
Misy fehezan-teny 9 amin'ny endrika Creed. Izy rehetra dia manomboka amin'ny fomban-drazana Creo… Miaro ny fahalalahana, indrindra ny fitenenana. Zon'ny mieritreritra, manana hevitra ary maneho izany. Miresaka momba ny zavatra manafintohina sy tsy raharahanao.
Mino aho fa afaka manohitra ny hevitrao manokana amin'ny hafa izay tsy tianao ianao, fa tokony hanana fahalalahana miresaka, manazava, manazava, miady hevitra, manafintohina, tezitra, maneso, mihira, manao tantara an-tsehatra ary mandà izay tianao.
Io dia milaza ho ambonin'ny fahalalahana maneho hevitra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny tranga mifandraika amin'ny finoana Silamo.
Navoaka voalohany tamin'ny 2013 tamin'ny ReadyingAgency.org.uk
Fiangaviana ny maha-zava-dehibe ny famakiana, ny boky ary ny tranomboky. Arovy foana ny famakiana, tsy hoe hianatra fotsiny fa hifalifaly, mamaky tantara foronina.
Miaraka amin'ny tantara foronina dia miteraka fiaraha-miory
Ity dia teboka izay tsy noeritreretiko mihitsy. Mety hiteraka fiaraha-miory ve ny foronina? Mendrika taratra izany.
Mikasika ny fahalalahana ny tranomboky. Fahalalahana mamaky, fahalalahana hevitra, fahalalahana mifampiresaka. Izy ireo dia mifandraika amin'ny fanabeazana, fialamboly, famoronana toerana azo antoka ary fidirana amin'ny fampahalalana.
Miaraka amin'ny fisitahana ankehitriny, dia manana adidy hiaro tranomboky isika. Betsaka ny olona mihevitra azy ireo ho fandaniam-bola tsy misy ilana azy. Tsy mahasoa izy ireo. Tsy mitombina ny fijerena ny tombom-barotra ao amin'ny tranomboky izay serivisy ho an'ny daholobe. Tsy azo refesina ny zava-bitany ara-toekarena.
Adidintsika ny mamaky amin'ny fahafinaretana. Raha mahita antsika mamaky ny hafa dia asehontsika fa zavatra tsara ny mamaky. Adidintsika ny manohana ny famakiam-boky, miteny manohitra ny fanidiana azy ireo.
Raha tsy manome lanja azy ireo isika dia mampangina ny feon'ny lasa ary manimba ny ho avy.
Ahoana ny fomba fanangonana seza
Fisehoana voalohany tamin'ny 2011 tamin'ny CD an'ny Hariva iray miaraka amin'i Neil Gaiman sy Amanda Palmer
Mbola tsy nilaza be tamiko izy.
Te-hahatakatra aho fa miresaka ny fahasarotana sy ny fahaiza-mandanjalanja izy rehefa manoratra tantara na boky, mampitaha azy amin'ny fanoharana amin'ny fanangonana ny seza.
Ary hatreto aloha ny famakafakana lehibe nataoko.
Manaova zavakanto tsara
Navoaka voalohany tamin'ny 2012 tamin'ny UArts.edu
Lahatsoratra misy fizarana 2 miavaka tsara. Ny voalohany famerenana ny fiainany izany ary ny fanapahan-kevitra sy ny tanjona napetrany ho mpanoratra.
Miresaka momba ny impostor syndrome, tsy fahombiazana, fahombiazana ary ny fomba hiatrehana azy ireo. Satria samy mitondra olana mifandraika amin'izany.
Ary avy eo ny olana lehibe indrindra amin'ny fahombiazana dia ny firaisana tsikombak'izao tontolo izao hanakana anao tsy hanao ny zavatra ataonao, satria mahomby ianao.
Tonga ny andro iray rehefa nanopy ny masoko aho ka nahita fa tonga olona izay ny asany lehibe indrindra dia ny mamaly ny mailaka ary izay nanoratra ho fialamboly
Ary mamporisika antsika hanaraka ny tanjontsika izany ary ho faly.
Toa tsy azo iadian-kevitra amiko ny ampahany izay miantoka fa ny asa rehetra izay nataony ho an'ny vola fotsiny dia diso. Na dia somary idyllika aza io dia tsy heveriko fa azo esorina amin'ny sisa amin'ny mponina eran-tany izany.
Fizarana faharoa miresaka momba ny kanto sy ny maha-zava-dehibe ny fanaovana zavakanto.
Manana ny fahaizana manao kanto ianao
Na inona na inona fifehezana dia afaka manamboatra zavakanto isika. Ary heveriko fa tokony hampihatra izany ny olon-drehetra, na dia tsy fomban'ny fiainantsika aza izany, na dia "fialamboly" aza izany, dia tokony hampihatra hetsika mifandraika amin'ny zavakanto isika rehetra. Fandokoana, sary, sary sokitra, fanoratana, sary sns ... Azontsika atao ny mampiasa azy io ao an-trano.
Gaiman dia manolotra antsika zavakanto, ho vahaolana amin'ny olan'ny fiainantsika, amin'ny asa, olana amin'ny fanambadiana na amin'ny mpivady, amin'ny olana ara-tsosialy, sns.
Manao fahadisoana mahaliana, tsy mampino, be voninahitra ary mahafinaritra. Mandika ny lalàna. Ataovy toerana mahaliana kokoa izao tontolo izao amin'ny alalanao ao. MANAO ARTSA TSARA
Ary manentana antsika izy mba hanao ny kantontsika, fa tsy hamela ny tenantsika ho entin'ny olona sy mitaona antsika. Hanao azy araka ny fombantsika, amin'ny fomba tsara indrindra ahafantarantsika ny fomba sy ny fahalalantsika tsara. Mamorona, manavao. Hira ho an'ny fahalalahana mieritreritra sy hetsika zavakanto tsy misy fanerena na tsy misy toro lalana.
1 Izaho mino
2 Ny antony mahatonga ny hoavintsika dia miankina amin'ny tranomboky, famakiana ary manonofinofy.
3 Ahoana ny fomba fanangonana seza
4 Manaova zavakanto tsara
5 Sarin'ny sary